Ụlọ ọrụ eletriki igwe eletriki eletriki - China Ndị na -emepụta eriri eletriki eletriki, Ndị na -ebubata ya
Mgbanwe nke ọnụahịa DHP
DHP ụdị yinye ọkụ eletrik dị mma maka obere ọsọ na obere njikwa ihe njikwa, nrụnye akụrụngwa, Ngwuputa na injin injin, wdg A na -ahụ ya site n'iji nwayọ na -ebuli ngwa ngwa, ịdị arọ dị mfe, ike siri ike na obere iyi. DHP ụdị eriri eletriki na -adịghị agwụ agwụ bụ nke a na -ejikarị eme ihe na ngalaba ọrụ nhazi ndụ niile, ụlọ nkwakọba ihe, ụgbọ mmiri, na ụdị ahịrị mmepụta ọgbara ọhụrụ, ahịrị mgbakọ. Ọ na -agbanwe agbanwe, na -eme ngwa ngwa, dị nchebe ma dịkwa mma iji rụọ ọrụ na obere spa ...
DHY eriri igwe eletrik
DHY ụdị usoro yinye ọkụ eletrik bụ ngwaahịa ama ama ama ụlọ ọrụ anyị. Ọ na -anabata teknụzụ mmepụta mba ụwa. Ọ nwere ezi uche imewe, elu Ọdịdị, mma anya, obere size, ìhè arọ, elu ike, mma na a pụrụ ịdabere na iji, mfe mmezi, inogide na ojiji, wdg uru.
DHS ụdị usoro yinye ọkụ eletrik bụ ngwaahịa ama ama nke ụlọ ọrụ anyị. Ọ na -anabata teknụzụ mmepụta mba ụwa. Ọ nwere ezi uche imewe, elu Ọdịdị, mma anya, obere size, ìhè arọ, elu ike, mma na a pụrụ ịdabere na iji, mfe mmezi, inogide na ojiji, wdg uru. Ọdịmma ya nwere ike dakọtara na ngwaahịa ụwa dị elu, ama ama ma n'ụlọ ma na mba ofesi.
Ihe nkesa DHK eletrik eletrik
DHK ụdị Fast Speed ​​Electric Chain Hoist bụ ụdị ngwaahịa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị. A nabatara ya na teknụzụ German. Ọ na -kpamkpam gbanwere Ọdịdị nke yiri ngwaahịa n'ụlọ na mba ọzọ, na etinyere maka mba patent. Ọ nwere uru nke na -ebuli elu. Stable na -agba ọsọ, kọmpat ahụ, obere olu, ịdị arọ dị mfe, ọrụ dabara adaba, ọdịdị dị mma, wdg.DHK ụdị Fast Speed ​​Electric Chain Hoist na -eji maka ibuli ihe dị arọ, yana nwekwara ike ịme usoro njem ohere w ...
1, sistemụ breeki abụọ, echekwabara na ntụkwasị obi. 2. Nnukwu arụmọrụ, moto dị nfe, sistemụ breeki na-enweghị asbestos, oriri ike dị ala. 3, stamping steel shell, ọkụ na ike, nchara nchara, nchara na -emebi emebi, na -eme ka ndụ ọrụ ka mma. 4. 5, na ngwaọrụ mgba ọkụ nwere oke, mgbe iru oke ga -akwụsị ọrụ na -akpaghị aka, iji gbochie ụdọ ahụ pụọ n'ihe egwu.
Ntuziaka Lever Chain ndoli, Lever Puller, Micro Electric eriri eriri, Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Igwe ọkụ eletrik eletrik, Bannon Electric Hoist,